ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်သံရုံးတို့၏ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး” သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုး | The Supreme Court of the Union
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်သံရုံးတို့၏ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး” သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်သံရုံးတို့၏ “တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး” သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်၊ စုဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Peter Lysholt Hansen နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက် ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင်ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်က ဒိန်းမတ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးကလည်းကောင်း၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ကလည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ အစီအစဉ်အောက်မှ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ်ရုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံရုံးတို့က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါသဘော တူညီမှုအရဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Peter Lysholt Hansen က ယနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် သဘောတူညီချက်အရ ဒိန်းမတ်အစိုးရက ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးသို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် အကူအညီများ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုကိုနိုင် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Peter Lysholt Hansen တို့သည် “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး” သဘောတူညီမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြသည်။